“Sacuudigu Waa Uu Awoodaa Inuu Is-Difaaco…” Boqor Salman – somalilandtoday.com
“Sacuudigu Waa Uu Awoodaa Inuu Is-Difaaco…” Boqor Salman
(SLT-Riyadh)-Boqorka Sacuudiga, Salman Bin Abdulaziz ayaa shalay sheegay in dalkiisa uu awoodo inuu iska difaaco wax uu ugu yeedhay “weeraradii fuleynimada ahaa” ee hakiyey kala-badh wax soo saarkii saliida dalkiisa, hase yeeshee waxa uu beesha caalamka ugu baaqay inay “si cad u wajahaan” kuwii ka dambeeyey.
Dowladda Sacuudiga ayaa ku celisay eedeynteeda ah in hubka Iran loo adeegsaday weerarka, hase yeeshee ma ayna yaboohin wax caddeymo ah oo taageereeya sheegashadeeda.
Hadalka boqorka ayaa waafaqsan kii madaxweynaha Donald Trump uu isniintii ku sheegay in ay u badan tahay in Iran ay mas’uul ka tahay weerarka.
Golaha wasiirada Sacuudiga ayaa sheegay in weerarkii sabtidii uu halis geliyey ammaanka dunida iyo qeybinta tamarta dunida.
“Ma doonayo inaan dagaal cusub ku lug yeelano, balse mararka qaar waad ku qasban tahay” ayuu yidhi. “Kani waxa uu ahaa weerar aad u weyn, balse waxaa looga jawaabi karaa weeraar dhowr mar kasii weyn.”